26 Feb 2020 | बुधबार, १४ फागुन, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
अष्ट्रेलियामा दुई विमान दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान मेलवर्नको ग्रामीण इलाकामा दुई वटा साना बिमानहरु आकाशमै एकआपसमा ठोक्किएर त्यसमा सवार चारै जनाको मृत्यु भएको छ । विस्तृतमा
अष्ट्रेलियाका यी ९ वर्षिय बालक आत्महत्या गर्न चाहन्छन्
अष्ट्रेलियाका चर्चित खेलाडी जसले आफ्नो सम्पुर्ण परिवारलाई जिउँदै जलाए
अष्ट्रेलियामा डरलाग्दो हिंसा, पूर्व रग्वी खेलाडीद्वारा श्रीमती र तीन सन्तानको हत्या !
अष्ट्रेलियामा अत्याधिक गर्मी, ९० घोडा मरे
अष्ट्रेलियाको उत्तरी क्षेत्र सेन्ट्रल ल्याण्ड काउन्सिल (सिएलसी) अनुसार अत्याधिक गर्मीका कारण ९० जंगली घोडाहरुको ज्यान गएको छ ।
अष्ट्रेलियामा एक महिलालाई कमोडमा लुकेको सर्पले टोकेपछि...
अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा एक महिलाले आफ्नै घरको ट्वाइलेटमा डरालाग्दो घटनाको अनुभव बटुल्न पुगेकी छिन् ।
अष्ट्रेलियाको एक रेस्टुरेन्टमा श्रीमतीले बिल तिर्न नमानेपछि श्रीमान्ले प्रहरीलाई बोलाए
सिड्नी । पति पत्नीबीच झगडा हुनु आम कुरा हो । उनीहरुबीच के कारणले झगडा पर्छ । यो पनि रोचक कुरा हो । टीभीको रिमोटका लागि, खाने कुरा नमिठो हुँदा वा चिसो टावलका कारण
अष्ट्रेलियाबारे अजबगजबका कुराहरु
आजकल हरेक जो कोहीको सपना अष्ट्रेलिया हुने गरेको छ । पढाइको कारणले होस् वा व्यापारका दृष्टिकोणले अष्ट्रेलिया जानेको लर्को लागेको छ । अष्ट्रेलियाबारे केही यस्ता अजगगजबका कुराहरु रहेका छन् जसबारे कमैलाई थाहा रहेको छ ।
अष्ट्रेलिया विशेषः उनी आफु बिते तर क्रियाशील जीवन जिउने उत्प्रेरणा दिएर गए ...
समुदाय , साथीहरु र परिवारको सहयोगमा अस्ट्रेलियामा क्यान्सरलाई पराजित गरेपछि मनिष सुवेदीले ६ वर्ष निकै सक्रिय जीवन बाँचे । उनले आफु क्यान्सर संक्रमित भएको प्रमाणित भएकै दिन देखि खुत्रुक्केमा रकम जम्मा गरे र नेपालको सिभिल अस्पतालका बिरामीलाई गतवर्षको दशैँताका सो रकम हस्तान्तरण गरे । उनलाई साथीहरु र समुदायले बचायो र उनले पनि समुदायका लागि अथक जीवन जिउने उत्प्रेरणा दिएर गए ।
अष्ट्रेलियामा भीषण बाढी, मङ्गलबार दुई जनाको मृत्यु
टाउन्सभिल । अष्ट्रेलियामा भीषण बाढी आएको छ । सो बाढीबाट मङ्गलबार मात्र दुई जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ ।
अष्ट्रेलिया विशेषः अष्ट्रेलियाका १० सुन्दर शहरहरु
विश्वको सबैभन्दा ठुलो आयरल्याण्ड र सबैभन्दा सानो महादेश अष्ट्रेलिया । वार्षिक लाखौ मानिसहरु अष्ट्रेलिया घुम्नका लागि जान्छन् । त्यहाँ भएका मनोरम दृश्यहरु यति लोभ लाग्दा छन् कि जो कोहीलाई आकर्षित गर्ने गर्छन् ।
यी हुन् विश्वकै शक्तिशाली गुप्तचर संगठन, अष्ट्रेलियाको गुप्तचर संगठन कति औँ स्थानमा ?
एजेन्सी । कुनै पनि देशको प्रभावशाली शक्ति उसको गुप्तचर संगठनको कार्यशैलीलाई हेरेर पनि मुल्यांकन गर्ने गरिन्छ । यो यकिनका साथ भन्न गाह्रो छ ‘गुप्तचर संगठन’ ले विशेष के कार्य गर्छ ।
अस्ट्रेलियामा पनि भीटेनको कार्यक्रममा झगडा, नेपालीहरुबीच कुटाकुट
सिड्नी । अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा सम्पन्न र्‍याप गायक भीटेनको कन्सर्टमा झगडा भएको छ । कार्यक्रमको लागी सिड्नी आइपुगेका भीटेनको कन्सर्ट चलिरहँदा नेपाली–नेपालीबीच झगडा हुँदा एकको टाउको फुटेको हो ।
हाम्रो शरीरलाई दैनिक कति मात्रामा क्याल्सियम आवश्यक पर्छ ?
काठमाडौं । विशेषगरि क्याल्सियम हाम्रो शरीरका हड्डीमा पाइन्छ । यसको मुख्य कामहड्डीलाई मजबूत पार्नु हो । क्याल्सियमको कारणले गर्दा नै मुटु, मांसपेशी, रगत तथा स्नायुकोषहरुले पनि शरीरमा स्वस्थ रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
बिहानै मनतातो पानी पिउँदा अनगिन्ती फाइदा
कसरी हुन्छ मधुमेह ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय
जन्मिए लगत्तै रिसाएकी यी बच्ची
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जालमा एउटा भर्खर जन्मिएको बच्चीको तस्बिर भाइरल भइराखेको छ । कारण उनले जन्मिए लगत्तै देखाएको रिस । उनको यही रिस देखाएको तस्बिर विश्वभर भाइरल भएको छ ।
यी हुन् १० भारतीय अर्बपतिका जवान छोरीहरु
होटलको बिल तिर्न नमान्दा ४ महिना जेल चलान
सलमानका फ्यान !